Talooyin iyo tabaha Sidee inuu ka soo kabsado iCloud Password
iCloud kuu ogolaanayaa inaad si ay u helaan music, sawiro, videos, xiriirada, iyo dokumentiyada iPhone, iPad, iPod, meel kasta oo aad. Waxay ka dhigaysa files share, u hagaagsan iyo gurmad si sahlan. Waxa keliya oo loo baahan yahay inaad sameyso hal shay: xusuusan account iCloud aad. Waad looga baahan yahay inay la soo wareegto in aad iCloud marka aad taageerto kor u files si iCloud, soo celinta xogta ka gurmad iCloud ama isku dayaan in ay u isticmaalaan "Raadi My iPhone". Si kastaba ha ahaatee, sida iska cad , aad illowdo furaha eraygaaga sirta iCloud tan aad halkan u joognaa.
Ka dhig shirts aad on! Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah siyaabaha sida inuu ka soo kabsado email password iCloud. Waxaad isku dayi kartaa mid ka mid sax ah sida ay xaaladdaada.
Muhiim: Guud ahaan, ID Apple yahay aqoonsiga ee xisaabtaada iCloud. Xaaladdan oo kale, kabsaday password iCloud ka dhigan tahay kabsaday sirta ah u ID Apple.
* Kaliya xusuusan ID Apple, laakiinse waxba kama sirta ah:
Tallaabada 1. Open goobta rasmiga ah ee Apple u soo kabsado password iCloud la browser web on your computer ah.
Tallaabada 2. Gali ID Apple (account email aad loo isticmaalo in lagu saxiixo ID Apple) iyo riix Next.
Tallaabada 3. Dooro sugida Email (aad u baahan tahay si aad u hubiso in aad email) ama jawaab su'aalaha ammaanka (geli jawaabta saxda ah sida aad bixisay markii aad markii hore la abuuro ID Apple aad)
Tallaabada 4. Haddii aad heshay email ee mailkooda ama su'aalo ammaanka jawaabay si sax ah, Apple ku siin doonaa xiriir ah in ay dib sirta. Just guji link in la furo suuqa kala dib sirta ah iyo qortaa erayga sirta ah oo cusub.
* Haddii aadan xusuusan karo ID Apple aad, waxaan ula jeedaa cinwaan email iyo password, markaa waa in aad samayn sida soo socota inuu ka soo kabsado lumay password iCloud:
Tallaabada 1. Open goobta rasmiga ah ee Apple u iCloud kabashada password on your computer la browser web ah.
Tallaabada 2. Click "Ilowday ID Apple aad?".
Tallaabada 3. Daaqadda pop-up ah, geli magacaaga iyo cinwaankaaga email hadda. Waxa fiican in aad u soo galaan ka hor Email Address (laga yaabo in aad ku qor cinwaanka email ah aad loo isticmaalo in lagu saxiixo ID Apple ay soo beegay nasiib). Riix Next.
Tallaabada 4. Habka sugida Select: sugida Email ama jawaab su'aalaha ammaanka.
Tallaabada 5. Haddii aad dooratay email sugida, hubi in aad email si ay dib password cusub. Haddii aad dooratay jawaabay su'aal ammaanka, markaas jawaabta galaan sida waxa aad u dhigay marka aad asal ahaan abuuray xisaabtaada.
Talooyin: sirta iCloud ilaaliya dukaanka macluumaadkaaga gaarka ah oo dhan ee iCloud oo uu idin ​​wada siiyo awood u leeyahay inuu helo qalab aad iyo masixi xog ku saabsan qalabka fog adigoo isticmaalaya Raadi My iPhone marka aad badiyay qalabka. Xaaladdan oo kale, waa in aad xusuusnaataa sirta. Oo waxaa aawaday ee ammaanka, si joogto ah u beddesho password iCloud haddii aad caadi ahaan u isticmaali xisaabtaada iCloud goobaha dadweynaha. Haddii qalab aad waxaa la dhigaa saxiixay in la account iCloud, waa inaad qarka u habayn ah si ay u ilaaliyaan qalab aad la furay dad kale: Settings tuubada> General> hoos ugu rogto oo ka jaftaa Touch ID & habayn > galaan Password.
Ilowday Password iCloud? Waxyaabaha la sameeyo si ay dib-u helin
Sida loo beddel iCloud e-mail Address.
Sida loo soo ceshano Xogta laga iCloud File kaabta
> Resource > iCloud > Sidee inuu ka soo kabsado iCloud Password